Vanhu vekuLibya Vari muZimbabwe Vanoratidzira muHarare
Zvizvarwa zveku Libya zviri muZimbabwe zvaratidzira pamuzinda wenyika iyi muHarare neChitatu zvichiti zviri kufara nekutorwa kwakaitwa guta guru reLibya reTripoli nevanhu vari kupandukira mutungamiri wenyika iyi, VaMuammar Gadhafi.
Vanga vachiratidzira ava vanga vachisanganisirawo vashandi vemuzinda we Libya muZimbabwe avo vati vari kufara zvikuru nekuti VaGadhafi havasisina simba.
Mumwe wevaratidziri ava, VaAbdusalam Sweey, avo vanoshanda nesangano reAfrica Rehabilitation Institute, vanoti vanga vari chipangamazano pakati peZanu-PF nehurumde yaVaGadhafi.
VaSweey vati Libya yave nyika itsva zvichitevera kutorwa kwakaitwa Tripoli nevari kupandukira hurumende avo vakatora zvakare muzinda waVaGadhafi muTripoli vakapisa zvinhu zvakawanda.
Mumwe wevanga vachiratdzira ava, mushandi wepamuzinda we Libya muHarare, VaAhmed Rabdi, avo vanove munyori pamuzinda uyu. VaRabdi vati vari kutsigirawo vari kupandukira VaGadhafi.
Mumwe muratidziri, VaNahdi Schue, vati VaGadhafi vanga vachitora oiri vachitengesera dzimwe nyika vodya nemhuri yavo chete mari yacho veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Varatidziri ava vapisawo mureza wenyika wanga uchishandiswa nehurumende yaVaGadhafi ndokusiya vakwidza mureza wave kushandiswa nevari kupandukira hurumende vachitungamirwa neboka riri kudaidzwa kuti National Transitional Council.
Mapurisa emuno anochengeta muzinda we Libya haana zvaaita kuvaratidziri ava uye mapurisa anodzivirira mvongamupopoto haana kumbosvika pachiitiko ichi.
VaGadhafi vanodyidzana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Mashoko ari kubuda mumapepanhau anoti VaGadhafi vangangotizira kuZimbabwe kana ku Angola zvichitevera kurwiswa kwavari kuitwa kunyika kwavo.
Asi munyori mubazi rinowona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaJoey Bimha, vanoti hachisi chokwadi kuti VaGadhafi vachatambirwa muZimbabwe.
Vechidiki veMDC vanoti havasi kuda kuti VaGadhafi vauye munyika sezvo Zimbabwe pari zvino ichichengeta vaimbove mutungamiri we Ethiopia, VaMengistu-Haile Mariam, avo vakapotera muZimbabwe mushure mekupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzezvizvarwa zveEthiopia pavakange vachiri kutonga.
Vakuru vakuru muZanu-PF vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio7 kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ndivo chete vane simba rekuti VaGadhafi vapotere munyika kana kuti kwete.
Hukama pakati pevaviri ava hunenge hwange husina kumira zvakanaka nenyaya yekuti kunyange Zimbabwe neLibya dzainge dzanyorerana chibvumirano chemazana matatu nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora pakati pebanga guru renyika ne Tamoil Company yeku Libya, hapana chakabuda sezvo Zimbabwe yakatadza kupa Libya zvirimwa nenyama zvayainge yavimbisa.
Asi zvinonzi mazuva apfuura, Libya yange yoedzazve kupinda munyaya dzekurima nedzekushanyirwa kwenyika.
Bhanga rekuLibya reLibyan Foreign Bank rine zvikamu zvehupfumi muJewel Bank. Vakawanda muhurumende vanoti zvinhu zvine Libya muZimbabwe zvingangozivikanwe chete nagavhuna weRBZ, VaGideon Gono.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaClifford Mashiri, vanoti VaMugabe vanokwanisa kutora VaGaddaffi kuti vapotere munyika.